Ogaden News Agency (ONA) – Maqaal: Goorma ayey EPRDF Albaabka Soomali Kafuri? By: Faysal Rooble
Maqaal: Goorma ayey EPRDF Albaabka Soomali Kafuri? By: Faysal Rooble
Posted by ONA Admin	/ October 7, 2018
Shirkii 11aad ee EPRDF ee shalay soo afjarmay waxyaabo badan oo xiiso leh ayaa laga bartay, midnimada weli sii nool ee EPRDF ha uguba horeyso. Waxaa inoo cadaatay in Abiy dumaalay lana wareegay quwadii Xisbiga. Hase yeeshee, weli Iftax ya Zamzam la inama odhan.
EPRDF waxaa la aasaasay 1988, waxana aasaasay Meles Zenawi iyo cadregii TPLF. Muuqaalkii Meles waa tagay, laakiin taladiisii wey dhaxal reebtay. Waxa EPRDF ka koobantaya laamo xisbiyeed ay ugu facweynyihiin TPLF, ODP, ADP, iyo Qowmoyadaha Isutaga Koonfurta. Intaas waxa dheer isagaa oo xisbigu leeyahay laamo ay ka mid yihiin Ururka Haweenka (Women League) Ururka Dhalinyarada (Youth League), Ururka Mushtarka oo ah dadka mashaariicda lasiiyo, iyo waxbadan oo ciidamada ah.
Tiro ahaan EPRDF waxaa xisbiga lagu qiyaasaa lllaa 10,000,000 (toban malyuun) dad gaadhaya. Meel kasta, hayad kasta, iyo munaafacaad kasta oo dalka ka jiraa gacanta ayey EPRDF Kula jiraa.
Intaa waxaa dheer in uu xisbigu gacanta ku hayo 499 kursi. Dalka oo dhan waxaa jiraa 547 kursi. 23 Soomaalidu leeyahay, inta Afar, Gumuz oo gidigoodba iska raaca EPRDF marka lagu daro, waxa kaliya ee ka weecda dariiqay ay EPRDF dalka u jeexday hal cod oo nin Axmaar ah oo shambal ama miijir ahaan jiray haysto.
Mabda EPRDF aaminsanayd waxa uu ku bilaabmay waxa la yidhaa Marxist-Lenenist Moist. Waxa hada (illa marka laga soo bilaabo 1994) uu xisbigu u xuub-siibtay wax politicsl science ku tilmaamo “Hal Xisbi oo kaligii Talis ama “One-Dominant Party System.” Noocan oo kale waxaa ku caan baxay xukunka uu Musafeniga Yugandha ka taliya.
Deeganka Soomaalida (SRS), in kasta uu marar badan codsaday in lagu daro Ururkan tunka Weyn, weli lama ogolaan. Hadana madaxda SRS codsi lamid ah laga ma aqbalin. Waxaase laga yeelay in dhawrka hogaamiyeyaal ee xisbiga talada haya ee ESPDP ka qayb galidoonaan, ama marti ka noqon doonaan, shirka EPRDF. Hasa yeeshee, go’aanada EPRDF talo ku ma yeelan doonaan.
Arintaasi waxay la mid tahay ahmiyada Inta badan lasiiyo dadyowga la gumaysto. Matalan, Falastiin mudo dheer kursi ku ma lahayn Qaramada Midoobay. Waxaase loo ogolaa in ay ka qayb gasho shirweynaha Qaramada Midoobay. Xiliyadii 195-hii, Faransiska iyo Ingriisku waxay shirarka barlamaanadooda kusoo macsuumi jireen dalalka ay guumaystaan.
Sidee wax u jiraan? Sidee looga dabaalan karaa hirarka siyaasadeed ee inagu soo wajahan?
Daganansho dagdag ah ayuu Deegaanku xiligan xaadirka ah u baahanyahay.
Waa in Dawlada curdinka ah ee Mustafa Cumar hogaaminayo talooyin iyo tusaaloyin lala wadaagaa – walee geedigu wuu dheer yahay, waxaanad moodaa in aynu taaganahay meeshaynu taagnayn 1992.
Waa in ONLF iyo Xisbiga talada hayaa ee ESPDP ka wada tashadaan agoonimada siyaasadeed ee inahaysa.
W/Q: Faysal Rooble.